Madaxweyne Farmaajo oo Kenya uga tacsiyadeeyay Muwaadiniin uga dhimatay Diyaaradii ku burburtay Bardaale. - Awdinle Online
Madaxweyne Farmaajo oo Kenya uga tacsiyadeeyay Muwaadiniin uga dhimatay Diyaaradii ku burburtay Bardaale.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Talaadada Maanta ah waxaa uu taleefanka kula hadlay Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta si uu u muujiyo sida uu uga xun yahay ugana tacsiyeeyo geerida muwaadiniinta Kenyanka ahaa ee ku dhintay diyaarad laga leeyahay Kenya oo ku soo dhacday degmada Bardaale ee Gobolka Bay, May 4, 2020.
Sida uu qoray Citizen TV oo laga leeyahay dalka Kenya Madaxweyne Farmaajo ayaa ku wargaliyay Madaxweyne Kenyatta in Hay’adaha Duulista Rayidka ah ee Soomaaliya ay si dhaqso leh baaritaan ugu sameeyaan duruufaha ku xeeran sababta keentay inay diyaarada burburto.
War kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha dibadda Kenya oo TV-ga Citizen uu baahiyey ayaa lagu sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu casuumaad u fidiyay Hay’adda Duulista Rayidka Kenya ee (KCAA) si ay ula midoobaan dhiggooda Soomaaliya si loo soo gabagabeeyo baaritaanka.
Uhuru Kenyatta ayaa u mahadceliyay Madaxweyne Farmaajo,waxaana uu tacsi u diray qoysaska labada shaqaala ee ku dhintay shilka diyaaradda, ”ayaa lagu yiri qoraalka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya.
Sidoo kale Uhuru Kenyatta ayaa soo dhoweeyay casuumaadda Madaxweyne Farmaajo ee masuuliyiinta duullimaadyada rayidka ee Kenya si uu ugu biiraan baaritaanka shilka diyaaradda isagoo carrabka ku adkeeyay baahida loo qabo in si dhakhso leh loo soo gabagabeeyo howsha.
Diyaaradda Embraer 120 ee ay maamusho shirkadda Africa Express ayaa waxaa la sheegay in ay hay’ad samafal ah u siday daawo iyo agab Caafimaad oo loogu talo galay magaalada Baydhabo iyo Magaalada Bardaale ee Gobolka Baay,waxaana dhacdadaas ku dhintay lix Ruux oo isugu jira laba Soomaali ah iyo Afar Kenyan ah.
Ilo xog ogaal ah ayaa Mustaqbal u sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu martiqaad u sameeyay Masuuliyiinta Duulista rayidka Kenya si ay uga qayb qaataan baaritaan rasmi ah oo lagu sameeyo shilkaasi diyaaradeed.
Falanqeeyeyaasha ayaa rumeysan in shilkaan uu holac kusii shidi karo xilfaatanka xukuumada Addis Ababa iyo Nairobi, oo sanadihii laso dhaafay ahaa mid meel adag maraya gaar ahaan siyaasada iyo dhaqaalaha.
Illaa iyo haatan, ma jiro war rasmi ah oo dowladdaha Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya ay kasoo saareen dhacdadaas galaaftay lix qof oo saarnaa diyaaradda oo shixnad gargaar caafimaad ka qaadey Muqdisho.
Previous articleDawada Covid-19 oo Lasoo Jeediyay Ma Nin Buka Boqol U Talisay Baa Mise Rajo Dhab ah?
Next articleCiidanka Booliska Soomaaliyeed oo Afhayeen Cusub loo Magacaabay.